सुत्केरी भएको दुई महिना पछि ‘सक्किगोनी’मा फर्किन् रक्षा श्रेष्ठ ! – Sandesh Press
काठमाण्डौं । हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनी’की चर्चित कलाकार हुन्- रक्षा श्रेष्ठ । कुमार कट्टेलको जोडीका रूपमा निकै रुचाइएकी रक्षा लामो समय सिरियलमा देखा परिनन् । आमा बन्ने भएपछि रक्षाले सिरियलबाट लामो बिदा बसिन् ।
१५ महिने लामो बिदा सकेर रक्षा पुनः सिरियलमा फर्किएकी छिन् । आज साँझ प्रसारण हुने ‘सक्किगोनी’को श्रृंखलामा रक्षा पनि देखिने कलाकार कुमार कट्टेलले बताए ‘रक्षाजी सक्किगोनीमा फर्किनु भएको छ । उहाँको पुनरागमनलाई लिएर हामी अझै उत्साहित भएका छौँ ’, कट्टेलले भने ।
आमा बन्ने भएपछि केही समय अभिनयबाट ब्रेक लिएकी रक्षा दुई महिनाअघि मात्रै आमा बनेकी छिन् । उनले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन् । छोरीको जन्मपछि दुई दिनअघि मात्रै एक म्युजिक भिडियो मार्फत् अभिनयमा फर्किसकेकी छिन् ।
लामो समयपछि सुटिङमा फर्किन पाउँदा उत्साहित भएकी रक्षाले भनिन्, ‘दर्शकमाझ पुनः आउन पाउँदा उत्साहित छु । तर पहिलाको जस्तो सुटिङमा मात्र ध्यान केन्द्रित नहुँदो रहेछ । सुटिङको समयमा पनि छोरीको चिन्ता भने लाग्दो रहेछ ।’
Prevबिजय शाहीले कती तमासा देखाको ? बिजयको अंग्रेजी र फर्मुलाको खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो सहित
Nextचम्सुरीलाई आफ्न्नै परिवारबाटै तीनजनाले मिर्गौला दिन तयार, कहिले गरिँदैछ प्रत्यारोपण, हेर्नुहोस्
MCC पास नगरेको भन्दै अमेरिकाले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई गर्यो देश निकाला गर्ने घो’षणा